प्रगति, को पाठ्यक्रम, मा-साइट लागत। बिल्कुल सबै प्रगति र अगाडी बढ्दै छ। यो पनि टेलिभिजन लागू हुन्छ। जानिन्छ, हाल को वर्ष मा भिडियो प्रविधि रुझान को बजार स्वतन्त्र वर्ल्ड वाइड वेब, इन्टरनेट भनिन्छ जसमा "जाने" गर्न सक्षम छन् कि देखा परे। र के मोडेल तपाईं, तपाईं ती वा अन्य सुविधा र नेटवर्क मा काम गर्ने क्षमता प्रदान विकल्प उपलब्ध हुनेछ लागि पाठ्यक्रम खरिद र, त्यसको आधारमा, जडान गर्न एक तरिका हो।
त्यसैले आज म इन्टरनेटमा आफ्नो टिभी जडान गर्ने बारे तपाईं संग कुरा गर्न चाहन्छु। बस म थोप्लो गर्न «म» चाहनुहुन्छ, त्यसैले तपाईं "इन्टरनेट टिभी" र "इन्टरनेट टिभी" को अवधारणा भ्रममा छैन। पहिलो मामला मा हामी उपकरण सामग्रीको वितरण प्रक्रिया बारे कुरा गर्दै छन्। यो महसुस गर्न, यो सामान्य आधुनिक टिभी छ suffices। यस मामला मा, जडान विशेष टिभी सेट-टप बक्स, सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा जडान हुनुपर्छ जो मार्फत बनेको छ।
तर इन्टरनेटमा टिभी जडान गर्न, तपाईं प्रत्येक ISP प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो अवस्थामा, तपाईं कुनै पनि संलग्नहरू खरिद गर्न आवश्यक छैन। यस्तो उपकरणहरू पारंपरिक टिभी भन्दा कार्यहरु को एक धेरै ठूलो दायरा छ। कम से कम यो दर्शक साइटहरू भ्रमण गर्ने अवसर छ जो मार्फत विशेष ब्राउजर, छ वास्तवमा प्राप्त गर्नुहोस्। साथै, उपकरण केही सम्भव स्काइप को एक विशेष टेलिभिजन संस्करण चलाउन बनाउँछ।
इन्टरनेटमा टिभी जडान गर्न कसरी हामी अब सार्न। वास्तवमा, यो सबै सेटिङ मेनु मा उपलब्ध मा निर्भर गर्दछ। प्रत्येक मोडेल र निर्माता भिन्न छन्। हामी सबैभन्दा चलिरहेको प्रक्रियाहरू विचार गर्नुहोस्। पर्याप्त तपाईं यी सिफारिसहरू तपाईं इन्टरनेटमा पहुँच छ।
एक साधारण तरिका - एक वायरलेस इन्टरनेट जडान। यसो गर्न के तपाईं राउटर आवश्यक हुनेछ। र घर प्रयोग ल्याप्टप लागि किनेको छ एक होइन, र आफ्नो TV को निर्माता देखि एक विशेष राउटर र यसको लागत दुई तीन पटक सामान्य भन्दा उच्च छ। आखिर, यन्त्र मात्र उसलाई काम गर्नेछ। तपाईंको टिभी एक वायरलेस नेटवर्क एडेप्टर छ भने यो विधि सान्दर्भिक छ।
कसरी इन्टरनेटमा आफ्नो टिभी जडान अर्को तरिकामा? तपाईं सीधा गर्न सक्नुहुन्छ। ले आफ्नो इन्टरनेट केबल र टिभीमा उपयुक्त पोर्टमा प्लग। यो जडान फाइदाहरू त्यहाँ एक राउटर किन्न कुनै आवश्यकता छ भन्ने तथ्यलाई मा निहित। तर drawback - यो असम्भव नेटवर्कमा अन्य उपकरणहरू जडान गर्न छ। त्यसैले तपाईं नेटवर्क स्विच प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ (नेटवर्क स्विच)। कर्ड को baseboard अन्तर्गत लुकाउन वा यो एक सौंदर्य उपस्थिति छ कि एक विशेष बक्समा हटाइएको हुनेछ।
निस्सन्देह, जो तपाईंलाई टिभी जडान गर्न सक्नुहुन्छ अन्य तरिकामा छन्, तर तिनीहरू सधैं यस्तो उपकरणहरू को बहुमत द्वारा समर्थित छैन, त्यसैले तिनीहरूलाई कुरा गर्नेछ लागि हामी यहाँ छन्। त्यो, अब तपाईंले कसरी इन्टरनेटमा टिभी जडान गर्न थाहा म यस विषयमा तपाईं बताउन चाहन्थे सबै छ। तर सल्लाह जडान गर्नु अघि तपाईं मार्गदर्शन पढ्न।
प्रोग्रामर तस्वीर: वर्णन, पद उपकरण
मेरो कम्प्युटर डिस्क ड्राइभ देख्न गर्छ
Pianist Nikolai Rubinstein: जीवनी, रचनात्मकता र रोचक तथ्य
VAZ-21103 - यसको सम्पूर्ण इतिहासमा AvtoVAZ को सबैभन्दा लोकप्रिय मोडेलको परिमार्जन
पहाडी elastica - घरेलू राम्ररी गर्दा अनि आनन्द को एक प्रतीक
आटा प्यानकेकहरू - एक पौष्टिक नाश्ता र एक स्वादिष्ट खाने को लागि नुस्खा
कसरी साइटमा मेपल को छुटकारा प्राप्त गर्न?
Thermally प्रवाहकीय टास्ने: विशेषताहरु र गोंद को आवेदन
वाल्वहरू समायोजन: प्रकारहरू, प्यारामिटरहरू, उद्देश्य
विशेषताहरु निलो रंग। नीलो जूता, लुगा र यो रंग अन्य सामान।
जापानी वाक्यांश अनुवाद: सुविधा र रोचक तथ्य को सूची